I-Cetilistat powder eluhlaza okwehliswa kwesisindo; AASraw steroid powder
ezaposwa ngomhla 11 / 26 / 2017 by UDkt Patrick Young bha liweyo cetilistat. Ibe 2 Comments.
I-Cetilistat powder eluhlaza / i-Cetilistat impahla eluhlaza isilwanyana esilungiselelwe ukunyanyisa ukukhuluphala. Yenza ngendlela efanayo ne-oldlist ye-orlistat powder ngokuvimbela i-pancreatic lipase, i-enzyme ephula i-triglycerides emathumbu. Ngaphandle kwale enzyme, i-triglycerides esuka ekudleni iyakhuselwa ekubeni i-hydrolyzed ibe yi-fatty acids free acids kwaye ixutywe ngaphandle. Kwi zilingo zabantu, letilistat powder yaboniswa ukuvelisa ukulahleka kwesisindo esifanayo kwi-orlistat. Iphumela ekulahlekeni kwesisindo kwaye ithatha amafutha ekudleni. Isilwanyana senza ngokuthe tye ukunciphisa ukutya, ngaphandle kokuchaphazela ingqondo.
I-Testosterone propionate powder: izibonelelo kunye nemiphumo emibi omele uyiqonde!	Ngaba abafazi banokuthatha i-Primobolan (i-Methenolone Acetate)?